Mmekọrịta Capricorn na Cancer: Enyi, Lovehụnanya na Mmekọahụ - Ihe Ịrịba Ama Zodiac
Tarot Kaadị Na-Agụ
Mmekọrịta Capricorn na Cancer: Enyi, Lovehụnanya na Mmekọahụ
Ọrịa Cancer na Capricorn na-eme ka njikọ chi! Mmadu abuo a bu ndi okacha amara nke jidesiri omenala, usoro ha na omenala ha ike. Ọrịa cancer siri ike nghọta, nwee mmetụta ịhụnanya, ma nwee ịhụnanya. Capricorn bụ onye nwere ezi uche, onye nwere ọgụgụ isi na ezigbo onye ndu. Ọrịa cancer enweghị nsogbu ịgbaso ndu Capricorn.
Nke a na-aghọ ndị enyi ngwa ngwa. Ọ bụ mmekọrịta ha na-adabere na nkwanye ugwu na nghọta. Ishụnanya adighi anya n’ebe di anya n’ihi na ha nwere otu obi. Site na mmekọrịta Cancer na Capricorn, ndị na-ahụ ihe nwere ike ịhụ etu duo si elekọta. Ha na-echebara ndị ọzọ echiche, nwee omume enyi, na-ahụkwa n’anya n’ụzọ niile.
Na Capricorn na-eduga n'okporo ụzọ, Cancer nwere mmetụta dị mma ma nwee ntụkwasị obi. Mana, ọ bụrụ na ume adịghị ike na-abanye na foto a, ikike ịdabere na ya nwere ike ịpụta. Ma ọ bụ ka njọ, duo a nwere ike iche na ọnya ma ọ bụ dị ka a ga - asị na ha na - ejide ibe ha n'ime nne na nna / nwa siri ike.
Capricorn na Isiokwu Ndị Dị Ọrịa Cancer
Mmekọrịta Capricorn na Ọrịa Cancer
Capricorn na cerhụnanya Ọrịa
Mmekọahụ na Ọrịa Cancer
Ọrịa Cancer Nwoke na Capricorn Nwanyị
Nwanyị Cancer na Capricorn Man Compatibility
Kechie Capricorn na Ọrịa Ọrịa Cancer
Egwuregwu Cancer na Capricorn na-akwado nguzozi mara mma. Mgbe mmekọrịta ahụ kwekọrọ, Ọrịa na-ewere ọrụ nke nurturer. Capricorn bụ onye na-elekọta ihe. Ha dị ka iberibe mgbaghoju anya abụọ dabara nke ọma. Mgbe ha sonyere na mmekọrịta, ihe osise dum na-agakọta ọnụ. Ọnọdụ kemịkalụ dị ọtụtụ dị ka nke dị iche bụ ihe na-adọrọ adọrọ. Otu ọ bụla na ịhụnanya a na-emejupụta mkpa dị ukwuu na onye ọlụlụ ha. Ọ dị ka ọnụnọ nke di ma ọ bụ nwunye ha na-emejupụta oghere ma ọ bụ oghere dị n'ime ha.
Obi uto nke ulo bu nkwa nke Cancer na Capricorn. Capricorn si ka ọchịchọ ha na-eduga ha imeri ụwa ma guzobe alaeze. Obi Ọrịa na-enye ha ohere idebe obi ọkụ mgbe Capricorn na-anọghị. Eze na eze nwanyi nke ebe obibi ha, Cancer, na Capricorn nwere ahụ iru ala n'ịhụrịta onwe ha n'anya ma zụlite ezinụlọ.
Na imekọ ihe ọnụ, Ọrịa na-aga n'ihu, atụmatụ Capricorn. Ọrịa cancer anaghị akwụ ụgwọ oge ha, ha anaghịkwa achọ ka Capricorn lelee ndepụta ịwụ ha. Capricorn bụ usoro na oge nghọta bụ uru bara uru. Capricorn nwere obi ụtọ karịa inye Ọchịchị Cancer nke ụlọ. Ha nwere ike inweta uto ha maka ịchịisi n'ebe ọrụ.
N'ime mmekọrịta Cancer na Capricorn, onye ọlụlụ Capricorn bụ onye ga-ebute ụzọ. Ha na-echebe onye ha na ha na-akwụ ụgwọ ọ bụla. Ọrịa cancer na-enwe obi ụtọ maka ndo nke Capricorn na-enye. Ha nwere ike ịmalite dị ka ndị enyi nwata ma ọ bụ zute mgbe ha tolitere. Kedu ụzọ ọ bụla, ọbụbụenyi siri ike na-abụ ntọala ntọala na-adịgide adịgide.
Ihe ndakọrịta dị elu n'ihi na ha gosipụtara mkpa nke ibe ha. Ha nwedịrị ike ịrụ ọrụ ụgwọ karmic nke ndị nna ochie ma ọ bụ site na ndụ ogologo oge gara aga. Mmekọrịta a abanye na nne na nna / nwa ike oge ụfọdụ. Ọ bụ ebe a ka ọnya ochie na-agbapụta site na ụbụrụ. Ọ na - enye ma ohere ịchọta mmechi na nsogbu mmetụta uche ochie ma bido iji okwu dị ọcha.
Fọdụ di na nwunye nwere ike rụọ ọrụ site na traumas nke ndị nna ochie na-ebu na mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ ha. Mgbe nsogbu Cancer na Capricorn na-ezute na mbụ, ha nwere mmetụta miri emi. Ihe dị n'ime ha na-agwa duo a na ha jikọtara ọnụ. Ọ bụrụ na ha anaghị agbakwunye na ọkwa ịhụnanya, ọ dịkarịa ala, ha bụ ndị enyi ndụ. Ha na-enwe mmetụta nke 'ịlaghachi n'ụlọ' ma ọ bụ dị ka a ga-asị na ha ahụta akụkụ furu efu nke onwe ha. Nkekọ mmetụta uche miri emi. Ọ na-atọ ha ụtọ ịnọnyere ibe ha mana ha chọrọ nnwere onwe. Ọ ga - enyere aka izere omume ịkpa mmadụ isi site na ịgbanye mgbọrọgwụ.
Anwansi nke Ọrịa Cancer na Capricorn sitere na esemokwu nke ihe dị iche. Egwuregwu ịhụnanya nke Cancer na Capricorn dị iche na ha enweghị ike inyere aka mana ha nwere mmetụta ịbịaru ibe ha. Ọ dịka a ga - asị na otu di na nwunye bụ bekee na - enweghị mmiri na mmiri ọzọ na - agba agba. Ha abụọ na-emeju ibe ha n'ụzọ ha na-enweghị ike itinye okwu na ya mgbe ha na-anwa igosipụta ya.
N'ime ime ụlọ, kemistụ na-aga n'ihu ma na-abawanye. Ma, Ọrịa Cancer na-ala azụ ịpụta na shea mmetụta uche ha. Ka ọ dị ugbu a, Capricorn maara ihe na-agụ ha agụụ. Obi dị m ụtọ na Capricorn nwere ndidi nke Chi. Ha na-ekwe ka Ọrịa Kansa were ha oge. Ha na-eche ka Ọrịa Cancer na-arụ ọrụ nke ịhapụ ihe mgbochi ọzọ. Ha ga-eduzi onye òtù ọlụlụ ha site na omimi mmetụta uche. Ọ bụ ihe omume, mana di na nwunye a ga-ahụ ọissụ nke ịtọhapụ mmekọahụ.
Ọrịa cancer na-ewetara Capricorn ọkwa mmekọrịta chiri anya nke ha na-ahụtụbeghị. Ọ dịka a ga - asị na Ọrịa Cancer na - akuziri onye ọlụlụ ha ka esi ahụ n'anya. Capricorn na-akụzi Ọrịa ka esi egosipụta mmụọ miri emi site na emetụ aka. Di na nwunye a na-abanye n'ime ime ụlọ ebe ha na-ejikọta ọmịiko na agụụ. Ọ bụ usoro zuru oke iji nweta ogo nke ecstasy.
Nkwupụta Okwu Capricorn na Gemini
Mmekọrịta Cancer na Capricorn dị elu n'ihi ụzọ ha si ekwurịta okwu. Ha nwere nkekọ uche dị nso na ha ekwesịghị ikwu okwu iji ghọta ihe ibe ha na-eche. Capricorn bụ olu banyere mkpa ha, ọ bụkwa ihe mmụta ha nwere ike ịgafe na Ọrịa Cancer dị jụụ, na-agafe agafe. Ọrịa cancer na-anabata ma dịkwa njikere ị listena ntị na Capricorn mgbe ọ bụla ha chọrọ ntị.
Abụọ ndị a nwere ike ikwu okwu ruo ọtụtụ awa ka ha na-enwekọ otu ihe. Ọrịa cancer ga-ekwu maka usoro ijikwa ụlọ na ịzụ ụmụ. Ha ga-ekerịta nrọ ha onwe ha n'ihi na ha hụrụ Capricorn dị ka onye na-akwado nkwado. Capricorn nwere mmasị ikwu banyere ọrụ ha. Ma, ha ga-akụ n’ime nrọ nke di ma ọ bụ nwunye ha. Mgbe ị na-arụ ọrụ n'otu, ndị mmekọ abụọ nwere ike hụ na ebumnuche onye ọ bụla hụrụ ngosipụta.
Ọ dịghị ndị otu na-eche banyere ihe nzuzo. Ikwesị ntụkwasị obi dị elu na ndepụta nke ihe ndị ị chọrọ. Omume nzuzo na-egosi ma ọ bụghị. Ọ bụrụ na onye ọ bụla jidere ihe nzuzo ya Ọrịa, onye nwere ike ọ gaghị esochi mmetụta ha miri emi. Capricorn nwere ike ọ gaghị agwa Cancer ihe niile ma ọ bụrụ na ha na-echebe mmetụta ha.
Capricorn nwere ike ịsị, 'liesgha ọcha adịghị mkpa.' Ọrịa cancer na-ekwu, 'Achọghị m ibu ibu arọ, yabụ m ga-edebe mmetụta ndị a n'onwe m.' Ha aghaghi ime omume nke ichoputa na ibe ha iji jide n'aka na ihe nzuzo agagh eme ka nsogbu ghara idi n'iru.
gịnị ka nọmba 44 nọchiri anya ya
Nsogbu Capricorn na Ọrịa Cancer
N'ime mmekọrịta Cancer na Capricorn, ha abụọ na-enweta nkasi obi n'ụlọ obibi. Nke a na-elekọta ụlọ ha n'anya ma na-abanye n'ime usoro na-adị mfe. Na Cancer na isi nke ime ka ụlọ ahụ bụrụ ebe dị nro na-ada, Capricorn nwere mmasị ịbịa n'ụlọ mgbe ọ rụchara ọrụ ogologo ụbọchị. Capricorn na-agbakwunye mmetụ ha n'ụlọ mgbe ha anaghị arụ ọrụ. Obi dị ha ụtọ inye Ọrịa Cancer ntakịrị nzaghachi ma werekwa ihe ndozi.
Ndị otu a na-ekwurịta okwu nke ọma ma na-eme ka ndị nne na nna mara mma. Ọrịa cancer na-akụziri ụmụaka ka ha rọọ nrọ. Capricorn na-akụziri ha ka ha mee nrọ.
Ebee ka njikọ Capricorn na Cancer na-ese okwu? Esemokwu ole na ole dị n'etiti mkpụrụ obi ndị a. Mana, ọnye ole na ole chọrọ ịza ajụjụ. Ọ na - enyere aka izere mbibi nke ohere dị ogologo oge. Capricorn hiwere isi na ezi uche na ụkpụrụ nke 'Ana m eji.' Ọrịa cancer na-ejide ụkpụrụ 'M na-eche' nso ma hụkwa ha n'anya. Ọ bụ ijikọta ọgụgụ isi na obi, yabụ duo nwere ike ọ gaghị ekwenye mgbe niile. Nabata echiche dị iche iche na-enyere aka ime ka udo dị na mmekọrịta ahụ.
Ndi mmadu na-acho ka ha were oge ha ma nwee obi uto. Ọ bụrụ na Capricorn nwere usoro ihe omume siri ike, ha nwere ike ha agaghị enwe oke ndidi maka Ọrịa Cancer. Ha nwere ike ịhụ di ha ma ọ bụ nwunye ha ka onye ihe na-adịghị mma.
Ọrịa cancer anaghị ahụ mkpa ọ dị ịgba ngwa ngwa. Capricorn chọrọ ịga n'ihu na ahịa ọzọ. Ọrịa cancer nwere ike ikwu okwu gburugburu. Capricorn na-ahọrọ okwu kwụ ọtọ na-enweghị ihe efu niile. Ọ bụrụ na otu na-eso ibe ya nwee mkpasu iwe, obere oge na-aga ogologo oge.
Ogologo oge mmekọrịta ahụ na-aga n'ihu, ohere ka ukwuu nke ịdaba na ọnyà. Nke mbụ, Ọrịa cancer ga-ewe iwe ma ọ bụ nwee obi ilu. Ọ bụrụ na ha na-anọkarị n’ụlọ mgbe niile ma ghara ịhapụ ịchụso onwe ha, ha ga-ewe iwe na onye òtù ọlụlụ ha.
Ọrịa chọrọ oge nha anya nke ịzụlite ezinụlọ na ilekọta ụlọ. Cancers bụ homebodies. Ma, ha nwere nnukwu echiche na ogologo ndụ ha na-achọ imezu kwa. Capricorn ga-eme nke ọma ịgba ibe ha ume ịchụso nrọ ndị ha chọrọ igosipụta.
Capricorn na Ọrịa Ọrịa Cancer
Ndakọrịta Cancer na Capricorn bụ ihe pụrụ iche n'ihi na ha nwere oke polarity. Ihe ịrịba ama abụọ ahụ daa n'okpuru mmetụta yiri nke ahụ. Yin bụ mmetụta na-achị nke mmekọrịta ịhụnanya a. Yin na Yang bụ ikike siri ike. Ha abụọ na-ewepụta àgwà na mmetụta ọ bụla nke polarity. Ike nwanyi bu Yin, Yang bu oke nwoke. Ha bu ihe jikoro ibe ha.
Yin ume a na-eme ihe, na-anabata ya ma na-adịghị emetụ n'ahụ. Ọ bụ ihe dị iche na nke Yang ịbụ nwoke, nkwenye ma na-eme ihe ike. Ọrịa cancer na Capricorn jikọtara ibe ha na ọkwa kensinammuo. Ha abua nabatara, ya mere ha mepere ma nabata ibe ha. Mmetụta Yin na-eme ka akara abụọ a dị nro, dị nwayọ ma na-echebara ndị ọzọ echiche. Mana, ọ bụrụ na Yin emezighị emezi, ọ na-apụta. Mgbe nke a mere, akparamagwa ọ na - akpọ bụ ihe megidere iwu.
Ọ bụrụ na Cancer na Capricorn nwere mmetụta nke ike, ha na-eme ihe ike. Ha nwekwara ike ịna-achọ naanị ọdịmma onwe ha. Ọ na - ebute Ọrịa Cancer na - enwe mgbanwe ọnọdụ uche karịa ka ọ na - adị. Capricorn anaghịzi anabata mmeghachi omume mmetụta uche nke Cancer. Capricorn nwekwara ike iwe iwe nke Cancer ma ọ bụrụ na ha bụrụ ndị nọ oke mkpa. Ọrịa cancer na-ewe iwe na Capricorn ma ọ bụrụ na ọ dị ha ka ha na-achọbiga ihe ókè.
Iji mezie ahaghị nhata, ndị ọzọ abụọ ga-enwerịrị ume Yang. Capricorn ga-ebute ụzọ na mmekọrịta ahụ. Ọzọkwa, ha ga-ezere ịbịaru nkwado ndabere. Ọrịa kwesịrị ịnabata nnwere onwe mgbe ọ na-adịchaghị mma.
Capricorn na Ọrịa Cancer
Egwuregwu ịhụnanya Cancer na Capricorn nwere akụkụ dị iche. Kedu ihe nke a pụtara? Akụkụ bụ mmesho ndị na-agụ kpakpando iji nyochaa zodiac ndakọrịta. Ihe nlele dị na ogo. Ọ na-ezo aka n’ebe dị anya n’agbata ihe ịrịba ama dị n’elu wiilị nke eluigwe. Na Cancer na Capricorn, ha nọ na ngwụcha ngagharị nke wiil ahụ. Ya mere, ha nwere uzo ozo ma obu nke ozo n'ihi na ha di iche iche. Ebe dị anya na-emepụta nha nke ogo 180.
Akụkụ mmegide na-emetụta mmetụta nke na-eme ka mmekọrịta dị na mmekọrịta. N'ime mmekọrịta ịhụnanya a, enwere ọtụtụ esemokwu. N'agbanyeghị ịbụ ndị na-emegide onwe ha, duo a nwere ọtụtụ ihe jikọrọ. Ha abụọ kwadoro, na-eguzosi ike n'ihe, ma jiri ịhụnanya kpọrọ ihe. Abụọ Ọrịa Cancer na Capricorn ndị mmadụ na-etinye aka na ebumnuche na nnukwu nrọ. Dịka otu, ha enweghị nsogbu na-arụ ọrụ maka ebumnuche ha kachasị elu.
Mgbe di na nwunye a jikọtara ọnụ, ha nwere ike bụrụ di na nwunye dị ike. Ebe ọ bụ na ihe ịrịba ama ndị ahụ dị n'akụkụ nke zodiac, ọdịiche dị n'etiti ha bụ nke mbubata. Ọ bụrụ na mmadụ abụọ a agbakụta ike, ọ na-abara mmekọrịta ahụ uru. Ndị otu ọ bụla nwere ike isi na ibe ha mụta otu esi emezi emezighị emezi nke ha. Ha abụọ tolitere n'ihi ya. Ihe omumu nke Capricorn bu oru ndi mmadu. Ihe omumu nke oria bu ihe huru uwa na ihe nile di n’ime ya n’anya.
Ihe Capricorn na Cancer
Na kpakpando, ihe omuma obula nke zodiac kwekọrọ na otu ihe anọ: Earth, Air, Fire, or Water. Ọrịa cancer kwekọrọ na mmiri mmiri. Iswa bụ mmetụta na Capricorn. Elementswa na mmiri mmiri na-arụ ọrụ nke ọma, na-ebute nkwekọ kwekọrọ.
Mmiri na ụwa nwere ihe dị mkpa iji chọọ nkwụsi ike na nurturt. Mgbe Cancer na Capricorn nwere njikọ, mmekọrịta ahụ bụ maka ịtọlite ​​nchebe obi. Nke a na-arụ ọrụ dị ka otu ìgwè iji zụlite ọdịdị nke ndidi na nghọta.
nwoke taurus na akwa ya na nwanyi nwere obi ojoo
N'ime mmekọrịta Cancer na Capricorn, mpaghara Ọrịa bụ ebe obibi na ime. Ọ bụ mpaghara a nke metụtara ọnọdụ mmetụta. Obodo Capricorn bụ ụwa na-arụ ọrụ, ụlọ ọrụ, na mpụta nke ụlọ. O nwere ihe omuma nke Capricorn ma na-eje ozi dika oche nke ochicho ha.
Mmekọrịta Cancer na Capricorn bụ ihe atụ nke 'ịdọta ihe ndị na-emegiderịta onwe ha.' Ma, ngwakọta na-arụ ọrụ zuru oke mgbe ihe niile kwekọrọ, na mmadụ abụọ ahụ kwekọrọ. Ihe nnabata Cancer na Capricorn dị elu. N'ihi gịnị? Nwoke Na-ahụ Ọrịa Cancer nwere ike ịlaghachi azụ ma zuru ike dị ka nwanyị nwere oké ọchịchọ Capricorn na-ebute ụzọ. Ọ na-enwe obi ụtọ ịgbaso ebe ọ bụla ọ na-agagharị dị nnọọ ka ọ na-ege olu ya mgbe ụfọdụ.
Mmetụta mbụ nke di na nwunye a na-enyere ibe ha aka. Mmiri mmiri na - eme ka Ọrịa Cancer dị nro, dị nro, ma gosipụta ihe. Nwanyị Capricorn na-enwe mkparịta ụka ya na ya dị ka onye miri emi na amamihe. Dreamdị nrọ ya na-akpali ya, ọ chọkwara inyere ya aka ime ka nrọ ya dị adị.
Nwanyị Capricorn bụ ihe siri ike na-abanye na mmekọrịta ahụ. Ọrịa Cancer nwere mmetụta uche na-agbanwe agbanwe. O nwere ike ịnọ na-arị elu ruo ụbọchị nanị ka ọ daba n'ime omimi nke echiche na mmetụta onwe ya. Ọ ga-anọgide na-abụ ọdụ ụgbọ mmiri dị mma maka ya na oke mmetụta uche ọ bụla. N'ezie, ọ ghaghị ịchịkwa mmetụta ya. Ọ bụrụ na o meghị ya, nwanyị ahụ nwere ike ịhụ ka ọnọdụ ya na-agbanwe dị ka ibu arọ.
Nwanyị Capricorn nwere ike ịghọta nnukwu ihe mgbaru ọsọ nke Ọrịa Cancer na-esetịpụ. Ọ kwadoro ọchịchọ ịnụ ọkụ n'obi ya. Ọ hụrụ na ọ dị mma, mara mma, ma nwee amamihe. Mgbe ya na Nwoke Na-ahụ Maka Ọrịa, ya na ha, ume dị n'etiti ha na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mee ka ha abụọ nwee ahụ dum. Ọ dị ka a ga - asị na ọ chọtara akụkụ na - efu efu nke onwe ya. Ọ na-eche otu ụzọ ahụ. Nwoke Na-ahụ Maka Ọrịa Cancer na-ekpo ọkụ ma nwee ọmịiko. Àgwà ya na-edozi ya dị mma ma na-elekwasị anya n'ihe omume. Ọ bụ ezie na ọ na-ebuli ya elu mgbe ọ na-ada, ọ na-enyere ya aka ịrịgo elu ọhụrụ. Ọ ga-akụzikwara ya banyere ijikwa omimi nke mmetụta uche.
Ọrịa Cancer ga-amụta iji ihe akpọrọ ihe ma ọ bụrụ na ọ ga-emeso Nwanyị Capricorn. Ọ ghaghị ịghọta na ọ bụghị ihe niile ọ na-ekwu bụ ihe nzuzo onwe ya ma ọ bụ nwee echiche zoro ezo. Ọdịdị ya na ịdị anya ya na-ejere ya ozi nke ọma na mpaghara ọrụ. Ma, ọ na-ewute osisi ike nke ndakọrịta Cancer na Capricorn. Ọ ga-eme nke ọma iji nlezianya na okwu ya na-ahọrọ okwu ya. Eziokwu abughi oyi dika o nwere ike iyi. Ọ ga-akwụsị ọchịchọ ọ bụla ma ọ bụrụ n’ezie na ọ ga-eme ka di ya nwee obi ụtọ. Ọ gaghị ekwu ya n’olu dara ụda.
Onye Ọrịa Cancer nwere ike nwute mgbe ụfọdụ, mana omume ya na-adịkarị elu. Ọ na-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye onye ọlụlụ ya maka ndụ, ebe ọ maara ihe mgbu nke eguzosighị ike n'ihe. Mgbe ọ mere, ọ pụtara ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-akụzikwara ya otu ọ ga-esi nweta ego ya, na-agba ya ume ịchekwa na itinye obere ego. Ọ bụ ihe dị mma kwa n'ihi na ọ bụ onye na-emefu mmetụta uche. Ọ na-adakwasịkwa mmefu nke mkpali. Onye ya na Capricorn dị ngwa ịkọwa nzuzu nke ụzọ ya. Ọ bụrụ na ọ kpachaghị anya, ọ nwere ike ịbịa dị ka ịchịisi ma ọ bụ iweda onwe ya ala.
Ihe omume Cancer na Capricorn na-enweta ọkwá dị elu ma ọ bụrụ na anyị atụlee ihe ndakọrịta. Ndị a bụ ndị enyi kachasị mma enyi na ọbụlagodi ezigbo ndị hụrụ n'anya. Nwanyị Cancer nwere mmetụta uche, na-ekpo ọkụ, ma na-ekwupụta okwu. Ike nke Capricorn Man na-arịọ ya ka ọ na-ekwe nkwa nchebe ya na echiche nke nchekwa. Ọ masịrị Nwanyị Cancer nwere ọgụgụ isi. Ọ na-adọrọ uche ya gaa na uche ya n'echiche nwanyị na oke nwanyị.
Ihe ndị na-achị achị nke ụzọ a na-eme ka nkwụsi ike nke egwuregwu ịhụnanya Cancer na Capricorn kwụsie ike. Nwanyị Cancer ahụ dara n'okpuru ọchịchị mmiri na Capricorn Man n'okpuru ọchịchị ụwa. Ihe ịrịba ama mmiri na nke ụwa na-emeju ibe ha. Ọ na-ebute mmekọrịta ọmịiko, nke miri emi, nke miri emi. Nwoke Capricorn bụ isi nke nkwụsi ike nke mmekọrịta ahụ. Ọ bụ arịlịka mmetụta uche maka Cancer Woman. Ọ ga-adọta ya mgbe ọ chọrọ enyemaka igwu mmiri site na mmiri mmetụta uche.
Ebe ọ bụ na Nwanyị Na-arịa Ọrịa Cancer bụ mkpụrụ obi na-enweghị nghọta, o yiri ka ọ maara ihe Capricorn chọrọ. O nwere ike igbo mkpa ya n’ajụghị ase ihe ha bụ. Enye ọdiọn̄ọ nte etiede enye ke idem, idem esinyụn̄ akpa enye ndikụt ke enye enen̄ede ọdiọn̄ọ enye.
Nwoke Capricorn na-amụta otu esi aga na ebb nke usoro mmetụta nke Cancer Woman. O nwere echiche nke ya banyere ebe ọ nọ ma a bịa n'ihe ndekọ ike mmetụta uche ya. Okwesighi ka juo ya udiri obi ya n’ihi na omara. Mana, ọ makwaara na ọ nwere mmasị ịnụ ka ọ na-ajụ otu ihe ahụ dịka ọ na-egosi nchegbu maka ọdịmma ya.
Iguzosi ike n'ihe dị na ndepụta dị mkpa maka mmekọrịta Cancer na Capricorn. Ofdị nraranye ha na-enyere mmekọrịta ahụ aka ịnọ n'ọnọdụ dị mma. Ọrịa cancer chọrọ onye ọlụlụ na-eguzosi ike n'ihe n'ihi na nhụsianya nke ekwesịghị ntụkwasị obi bụ ihe a na-apụghị ịnagide. Nwoke Capricorn chọrọ ikwesị ntụkwasị obi n'ihi na ọ chọrọ inwe ike itinye uche ya niile na ọchịchọ ya. O nweghi oge iji tinye ogige gburugburu ya na nwanyị ibe ya.
Otu abụọ na njikọ a nwere anya ha maka ọdịnihu. Ọ bụ ihe dị n’ọdịnihu dị nso nke na - eweta nsogbu mmekọrịta. Ọdịdị mmetụta uche nke Nwanyị Cancer na-elekwasị anya na nchụso nke mmụọ. Capricorn bụ ihe dị iche na ụwa siri ike. Ha nwere ike ghara ịhụrịta anya n'anya dịka nke a siri dị. Ha kwesịrị inye ibe ha ohere maka ito eto. Nwoke Capricorn nwere ike inye nwanyị Cancer ahụ anya dị egwu. Karịsịa ma ọ bụrụ na ọ gwara ya soro ya gaa njem ọzọ ọ ga-aga ebe obibi ọsụsọ!
Ebumnuche oké ọchịchọ nke Capricorn nwere ike ibute ụzọ karịa Cancer na-ahọrọ. Ọ bụ onye nwe ụlọ ma chọọ ka nwoke ya biri n'ụlọ ya na ntanetị ma na-ewu akwụkwụ ịhụnanya. Ọ bụrụ na ọ rapara n'ahụ́ nke ukwuu, o nwere ike ịna-echegbu onwe ya. Ọ bụrụ na ọ na-elekwasị anya na ebumnuche naanị ya, nwanyị Cancer nwere ike iche na ọ na-agbara ya ọsọ.
Ọ bụ ezie na Ọrịa Ọrịa na-amasị ịbụ onye a na-eduzi, ọ pụtaghị na ha achọghị ikwu okwu ha oge ụfọdụ. Nwoke ahụ Capricorn ga-egosi na ọ dị njikere ịhapụ di ya ma ọ bụ nwunye ya inwe olu na mmekọrịta ahụ. Ileghara ya anya ka a nụ ya ga-eme ka iwe iwe n'ọdịnihu dị.
scorpio nwaanyị na cancer nwoke n'anya ndakọrịta
Ajụjụ nke Cancer na Capricorn ndakọrịta nwere nnukwu nkwa. Enwere njikọ karmic miri emi dị n'etiti Capricorn na Cancer. Ọ ga-egwu egwu n'ihe gbasara ịhụnanya ha. Ọganihu karmic na-abịa mgbe duo a na-enyere ibe ha aka ịkwụ ụgwọ ahụ.
Ọ bụrụ na ịga nke ọma, Cancer na Capricorn nweere onwe ha ịnụ ụtọ mmekọrịta ịhụnanya, izi ezi, na ikpe ziri ezi. Ọrịa cancer ga-enwe ihe ịma aka nke ịmụta iguzosi ike n'ụzọ mmetụta uche. Naanị mgbe ahụ ka ha nwere ike ịgbanahụ nne na nna / nwa na-akpa ike ma ọ bụ na-eche echiche. Capricorn ga-achọ ịma mgbe a ga-egbutu ụdọ. Ma ọ bụghị ya, ịchọta obi ụtọ na njikọta a abụghị ihe niile siri ike.
Astros Daily na-egosi Astros niile ozi ndakọrịta ị na-achọ iji chọpụta ihe ndị ọzọ! You na-eche ma enwere ọrụ karmic na-eme na mmekọrịta gị? Mụtakwuo otú ndị ị hụrụ n'anya si eche echiche na otú ha si akpa àgwà. Jiri ozi ị chọpụtara ga - eme ka ndụ ịhụnanya gị na - aga nke ọma. I nwekwara ike ime ka mmekọrịta gị na ndị ezinụlọ gị ka mma.
Guo ihe niile Banyere Capricorn Zodiac Sign
Pịa ịmụta ihe niile Àgwà Capricorn, Àgwà, na Àgwà !
Na-achọ ịhụnanya? Pịa ka ịgụọ ihe niile Mmekọrịta Capricorn !
Nweta ihe omimi banyere ihe a Nwoke Capricorn !
Kọwaa ihe omimi nke Nwanyị Capricorn !
Nwere Nwa Nwaanyị Capricorn Ma ọ bụ Nwa? Pịa ka ị gụọ ihe niile gbasara Nwa Capricorn !
jupiter nke zodiac choro ugbua
Nwoke na-eto eto na nwanyị Taurus nwere mmasị na ndakọrịta
ebee ka ụwa dị ugbu a